Dawladda oo joojin karta lacagta ay siiso jaaliyada Turkida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda oo joojin karta lacagta ay siiso jaaliyada Turkida
La daabacay måndag 25 april 2016 kl 10.14
Barbaros Leylani : "Ha la laayo kalaabta armaanida ah"
Calanka Turkiya. sawir: Sawirle Besir Kavak, Sveriges Radio
Ururka isbaheeysiga Turkida Iswiidhan ayaa dib u bixin karta kaalmo dhaqaale gaadhaysa dhowr milyan oo ay ka heshay dawladda. Sababta oo ah in ay dawladdu hubin in u ururkani dimuqraadi yahay.
Arrinkan ayaa ka dhashay shirkii ka dhacay suuqa sergels torg sagaalkii bisha, halka uu gudoomiye ku xigeenka ururkani, Barbaros leylani masraxa halkaas soo istagaay, dabeetana jidhi ” Ha la laayo kalaabta armaanida, ha la laayo, ha la laayo”, waa sida uu u sheegay Leylani.
-In qof ururkan ka tirsan sidan u hadlo ayaan ku habooneeyn qimeeynta uu ururkani leeyahay, tan oo ah in la ixtiraamo xuquuqda binaadanka. Iminkana waxaanu biloownay baadhitaan go´aaminaya in ay dawladdu sii waddi doonto kaalmada dhaqaale ay ururkan siiso, ayuu sheegay Anders Hagquist oo qeeybta saxaafada u qaabilsan heeyada dhalinyarada iyo bulshadda ee MUCF loo soo gaabiyo.
Barbaros Leylani ayaa ka dib marku aflagaadadan ka sheegay sergels torg booskiisi laga qaaday, islamarkaas ayuu raali geliyay dadkii u caayay. Hasayeeshe Hagquist ayaa u jeeda in aaney ahin markii ugu horreeysay uu ururkani sidan u dhaqmo, sidaas daraadeed ayaan baadhitaankan u sii wadayna, ayuu sheegay.
-Dhowr ashkato oo aan aheeyn kii ka dhacay sergels torg ayaan hadda baadhayna.
Kuwan ayaa tusaalahaan ka yimid dad hore ka mid ahaan jiray ururka isbaheeysiga Turkida Iswiidhan. Kuwan oo sheegay in ay waayo aragnimo u haystaan hadalyo iyo qoraalo naceeyb ka buxo ururkan gudahiisa.
-Hadii ay dawladdu lacagtan naga joojiso waa wax si xun noo saameeyn doona, musalif ayaanu geli laheeyn, ka dib na ururkeeno ma jiri laheeyn. Sidaas waxaa sheegay xooghaya ururkan Yasin Ipek.
-Ma nihin urur cunsuri amba fashiistii ah. Aniga ilama saxsana in wax qof keliya sheegay lugu ganaaxo urur dhan. Lama soconin in u Barbaros Leylani fikradahan haysteey, hasayeeshe wuxuu ku ficaan yahay in u hadda is fashiliyay, anaguna ogaanay wuxuu yahay, ayuu sheegay Yasin Ipek.